Nijanona tamin'ny Logo Apple ny iPhone? Ity ny The Real Fix. - Iphone
naoty voafafa avy amin'ny iphone
iphone fampiharana fanavaozana tsy mandeha
ny fomba hahazoana serivisy amin'ny iphone
ny fomba fanitsiana ny famirapiratan'ny jiro amin'ny iphone
Nijanona tamin'ny Logo Apple ny iPhone? Ity ny The Real Fix.
Milamina ny zava-drehetra mandra-pameron'ny iPhone ny iPhone ary tafatoetra amin'ny sary famantarana Apple. Nieritreritra ianao hoe: 'Angamba mitaky fotoana lava kokoa amin'ity indray mitoraka ity', saingy tsapanao fa nisy zavatra tsy nety. Efa nanandrana namerina namerina anao iPhone ianao, nampiditra azy tao anaty solosainao, ary tsy nisy nety. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny iPhone-nao no mijanona amin'ny sary famantarana Apple SY ahoana marina ny fanamboarana azy.
Izaho dia Apple Tech taloha. Ity ny Marina:
Betsaka ny fampahalalana momba an'ity lohahevitra ity any, ary izany dia satria olana iraisana io. Ireo lahatsoratra hafa rehetra hitako dia mety na tsy feno.
Amin'ny maha teknolojia an'i Apple ahy dia manana traikefa an-tànana niasa tamin'ny iPhones an-jatony aho, ary fantatro fa mihitsoka amin'ny sary famantarana Apple ny iPhones noho ny antony maro samihafa. Ny fahafantarana ny antony mahatonga ny iPhone mihitsoka amin'ny sary famantarana Apple amin'ny voalohany dia hanampy anao hisorohana ny fiverenany indray.
ny iPhone dia tsy mitsahatra mamerina hatrany hatrany
Tsindrio eto raha te hitsambikina miankavanana amin'ny fanamboarana ianao. Tohizo ny famakiana raha te hianatra ianao hoe inona ny iPhoneo tena manao rehefa mampiseho ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery ianao mba hahafantaranao izay tsy nety.
Manaraka izany, hanampy anao aho hamantatra izay nahatonga ny olana voalohany. Indraindray dia miharihary, fa matetika ny fotoana dia tsy. Aorian'ny fahafantarantsika izay nahatonga ny olana dia hatoro anao ny fomba tsara indrindra hanamboarana azy.
Inona Marina Mitranga rehefa mirehitra ny iPhone-nao
Eritrereto ireo zavatra rehetra tokony hitranga alohan'ny hanaovanao ny maraina. Mety mieritreritra zavatra toa ny fanaovana kafe ianao, mandro, na manangona sakafo atoandro ho an'ny asa, saingy asa avo lenta ireo - toy ny apps amin'ny iPhone-nao.
Matetika isika tsy mieritreritra ireo zavatra fototra izay mitranga aloha, satria toa tonga ho azy ireo. Na dia alohan'ny hialantsika eo am-pandriana aza dia mamelatra, manidina ny fonony isika, mipetraka ary mametraka ny tongotsika amin'ny tany.
Tsy dia samy hafa be ny iPhone-nao. Rehefa manomboka ny iPhone-nao dia tsy maintsy mamelona ny fikirakirany izy io, manamarina ny fahatsiarovany azy ary mametaka singa anatiny ao anatiny alohan'ny ahafahany manao zavatra sarotra, toy ny zahao ny mailakao na ny fampiharana ny app-nao. Ireo fiasa fanombohana ireo dia tonga ho azy ao ambadika rehefa asehon'ny iPhone ny sary famantarana Apple.
Fa maninona ny iPhone no mijanona eo amin'ny Apple Logo?
Tafahitsoka amin'ny sary famantarana Apple ny iPhone-nao satria nisy zavatra tsy nety nandritra ny fanombohany. Tsy toy ny olona iray, ny iPhone-nao tsy afaka mangataka fanampiana, ka mijanona fotsiny. Maty. Apple logo, mandrakizay.
Fantatrao izao NAHOANA miraikitra amin'ny iPhoneo ny sary famantarana Apple, manampy amin'ny filazanao amin'ny fomba hafa ny olana: Nisy zavatra niova tamin'ny fandaharam-potoana fanombohan'ny iPhone anao ary tsy mandeha intsony. Fa inona no nanova azy? Tsy manana fidirana amin'ny fandaharam-potoana fanombohana iPhone ny fampiharana, noho izany tsy izy ireo no diso. Ireto misy azo atao:
Fanavaozana, famerenana amin'ny laoniny ary famindrana data avy amin'ny solosainao mankany amin'ny iPhone-nao manana fidirana amin'ny fampiasa fototra, izy ireo koa afaka miteraka olana. Ny rindrambaiko fiarovana, ny tariby USB tsy mandeha ary ny seranan-tsambo USB diso dia afaka manelingelina ny fizotry ny famindrana data sy ny antony lozisialy rindrambaiko izany dia mety hahatonga ny sary famantarana Apple hijanona amin'ny iPhone-nao.
Famakiana tranomaizina: Tranonkala maro hafa (sy mpiasa Apple sasany) no miantsoantso hoe: “Jailbreaker! Manompo anao marina! ” isaky ny mahita an'io olana io izy ireo, fa tsy ny famakiana ny tranomaizina ihany no mety hahatonga ny iPhone hikatona amin'ny Apple Logo. Voalaza fa ambony ny mety hisian'ny olana rehefa ianao jailbreak ny iPhone . Tsy ny fizotran'ny jailbreaking fotsiny dia mila famerenana amin'ny laoniny tanteraka, fa ny anarany dia avy amin'ny nanapotehany ny apps 'avy any am-ponja', mandingana ny fiarovana Apple ary mamela azy ireo hiditra amin'ny fampiasa fototra an'ny iPhone. Ity no hany tranga misy fampiharana afaka mahatonga ny iPhone hikatona amin'ny sary famantarana Apple. Psst: Nataoko jailbroken ny iPhone -ko taloha.
Olana amin'ny hardware: Nolazainay teo aloha fa ny iPhone-nao dia mizaha ary miaraka amin'ny fitaovana ilaina ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fanombohana. Andao hampiasa ny Wi-Fi ohatra: Hoy ny iPhoneo, 'Hey, karatra Wi-Fi, velomy ny antenao!' ary miandry valiny. Ny karatra Wi-Fi anao, izay rendrika tao anaty rano vao haingana, dia tsy mamaly. Miandry ny iPhone anao, ary miandry, ary miandry… ary mijanona amin'ny marika Apple hatrany, mandrakizay.
Manoratra ity lahatsoratra ity aho satria ny hafa rehetra hitako dia manolotra vahaolana iray na roa (famerenana mafy sy famerenana amin'ny laoniny DFU) ary mpamaky maro koa no tsy hanampy azy ireo. Tsy misy vahaolana tokana amin'ny olana rehetra. Miankina amin'ny antony nahatonga ny iPhone niraikitra voalohany ny vahaolana.
gmail tsy manavao amin'ny iphone
1. Hard Reset ny iPhone (Fa tsy hiasa 99% amin'ny fotoana)
Angamba ianao ao amin'ny 1 isan-jato, fa amin'ity tranga ity dia tsy maharary ny manandrana. Ny famerenana mafy dia manery ny iPhone hamonoana haingana ary hiverina, izay indraindray afaka manamboatra glitch rindrambaiko madinidinika.
Mba hanaovana famerenana mafy amin'ny iPhone 6S sy ireo maodely taloha, tsindrio ary tazomy ny bokotra Home (bokotra boribory eo ambanin'ny fampirantiana) ary iombonan'ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny fanjavonan'i Apple ary miseho indray eo amin'ny efijery, ary avelao handeha.
Raha mampiasa iPhone 7 ianao dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra ary midina ambany bokotra mandra-panjavonan'ny Apple logo ary hiseho eo amin'ny efijery.
Raha manana iPhone 8 na vaovao ianao dia tsindrio ary alefaso ny bokotra fanamafisam-peo, avy eo dia tsindrio ary alefaso ny bokotra ambany, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-panjavonan'ny Apple logo ary hiseho indray.
2. iOS Update, Restore, ary ny olana momba ny famindrana data eo anelanelan'ny iPhone sy ny solosaina
Betsaka no mety tsy mandeha rehefa alefa amin'ny alàlan'ny solo-sainao ny angona. indrindra raha mampiasa PC ianao. Fitaovana ivelany hafa fotsiny ho an'ny solo-sainao ny iPhone-nao, ary misy rindrambaiko maro hafa afaka miditra sy manelingelina mandritra ny fotoan-tsarotra misy ny fanavaozana iOS na famerenana amin'ny laoniny.
Andao lazaina fa mampiasa iTunes ianao hanavaozana ny rindrambaiko iPhone. Ny iPhone dia miverina (midika hoe tapaka izy io ary miverina haingana) mandritra ny fanavaozana, saingy amin'ny solosainao dia toa nesorinao izy io ary nampidirinao indray.
Ny rindrambaiko antivirus anao dia miditra ary miteny hoe: “Mijanona! Mila mijery anao aho! ' ary manapaka ny famindrana angona. Nofoanan'ny iTunes ny fanavaozana, ary avela havaozina tsy ho azo ampiasaina intsony ny iPhone-nao. Matetika, ny iPhone-nao dia miditra amin'ny maody fanarenana ary mampiseho ny 'Connect to iTunes', fa indraindray tafahitsoka amin'ny sary famantarana Apple izy.
Raha tafahitsoka amin'ny sary famantarana Apple ny iPhone aorian'ny fampiasanao iTunes hanavaozana, hamerenana, na hamindranao angona ho an'ny iPhone anao, dia mila ajanonao vetivety ilay rindrambaiko nahatonga ny olana alohan'ny hanohizanao. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny olana mety hitranga eo amin'ny iTunes sy ny rindrambaiko hafa dia zahao ny lahatsoratr'i Apple momba ny fomba hamaha olana eo amin'ny iTunes sy ny rindrambaiko fiarovana an'ny antoko fahatelo . Matetika ny olana dia miseho amin'ny PC, fa ny olana amin'ny famindrana data afaka miseho amin'ny Macs ihany koa.
3. Zahao ny Cable USB sy ny Port-nao USB
Ny tariby USB tsy mandeha tsara sy ny seranan-tsambo USB amin'ny PC sy Mac dia mety hanelingelina ny fizotry ny famindrana data sy hanimba ny rindrambaiko an'ny iPhone. Raha nanana olana taloha ianao dia manandrama tariby hafa na mampifandray ny iPhone amin'ny seranana USB hafa. Raha tsy azonao atao ny mamantatra izay tsy mety amin'ny PC-nao dia mora kokoa indraindray ny mampiasa solo-sain'namana rehefa mila mamerina ny iPhone-nao.
4. Avereno alefa ny iPhone-nao, raha vitanao
Alohan'ny hitohizantsika dia zava-dehibe ny fananana a nomaniny ho solon'izay ny iPhone amin'ny iCloud , iTunes , na izay nahita . RAHA Feno iCloud fitehirizana mikirao praogramanao dia ny programa izay mifehy ny fomba fiasan'ny fitaovana amin'ny iPhone-nao.
Ny tranokalan'ny Apple dia tsy manana torolàlana momba ny fomba famerenana amin'ny laoniny DFU, satria matetika dia be loatra ny fihoaram-pefy. Nanoratra lahatsoratra izay mamaritra ny tena marina aho Ahoana ny fametrahana ny iPhone ao anaty maody DFU ary manaova famerenana amin'ny laoniny DFU . Raha tsy mahavaha ny olana izany dia miverena amin'ity lahatsoratra ity hianaranao izay safidinao.
Momba ny olan'ny Hardware
Toy ny efa noresahintsika, ny iPhone-nao mihitsoka any ho any amin'ny fizotrany. Rehefa mandrehitra ny iPhone-nao ianao, ny iray amin'ireo zavatra voalohany ataony dia ny fanaraha-maso haingana ireo fitaovanao. Raha ny tena izy dia manontany ny iPhone anao hoe: “Processeur, eo ve ianao? Tsara! Memory, eo ve ianao? Tsara! ”
Tsy hivadika ny iPhone-nao raha toa ka tsy manomboka voalohany ny singa fitaovana lehibe iray satria izy io tsy afaka Alefaso. Raha ny iPhone simba rano , misy vintana tsara ilainao hanamboarana azy io hamahana ity olana ity.
6. Safidy fanamboarana
Raha efa noraisinao ny soso-kevitra rehetra etsy ambony ary ny sary famantarana Apple dia Na izany aza tafahitsoka amin'ny efijery iPhone-nao, tonga ny fotoana fanamboarana azy. Raha eo ambany fiantohana ianao dia tokony hanarona ny fanamboarana i Apple RAHA tsy misy fahasimbana hafa. Mampalahelo fa raha naka ny soso-kevitro etsy ambony ianao ary mbola tsy mandeha ny iPhone dia misy endrika fatiantoka rano na vatana mety ho meloka.
Raha misafidy ny amboary ny iPhone amin'ny alàlan'ny Apple , angamba mila manolo ny anao izy ireo hamahana ity olana ity. Matetika, ny Apple logo dia nikatona teo amin'ny efijery noho ny olana amin'ny tabilao lozika an'ny iPhone anao, ary tsy zavatra azon'i Apple avadika ho ampahany vaovao izany. Raha mitady safidy tsy lafo ianao, hanin-kotrana dia serivisy fanamboarana on-demand izay manao asa kalitao.
iPhone: Tsy mijanona intsony eo amin'ny Apple Logo
Antenaina fa amin'ity fotoana ity ny iPhoneo dia tsara toy ny vaovao ary tsy hiatrika an'io olana io intsony ianao. Niresaka momba ny antony maromaro mahatonga ny sary famantarana Apple miraikitra amin'ny efijery an'ny iPhoneo sy ny vahaolana samihafa mihatra amin'ny tsirairay izahay.
Ity dia olana iray izay matetika tsy miverina aorian'ny raikitra - raha tsy hoe misy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana. Tiako ny maheno ny fomba nikatonan'ny Apple logo tamin'ny iPhone anao tamin'ny voalohany sy ny fomba nanamboaranao azy tao amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany.